August 2020 - Nalonetardiary
လမ်းတောင် မလျှောက်နိူင်အောင် နာနေတဲ့ ဒူးကျီးပေါင်း ကိုယ်တွေ့ပျောက်ကင်းစေတဲ့နည်း
August 31, 2020 by Nalonetar Diary
” ကိုယ်တွေ့မို့ မျှဝေပါရစေ ” လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ လလောက်ထဲကလမ်းတောင်မလျှောက်နိူင်အောင် နာနေတဲ့ ဒူးကျီးပေါင်းတက်တာအထူးကုနဲ့ပြ/ဆေးမျိုးစုံသောက်/စက်တွေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ် မပျောက်လို့စိတ်ညစ်နေတာ … သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးသူ့ကိုယ်တွေ့ဆိုပြီးညွန်းလို့ မယုံပေမဲ့စမ်းကြည့်လိုက်တာ တပတ်အတွင်းလုံးဝနီးပါးပျောက်သလောက်ဖြစ်သွားလို့ ပြန်လည်မျှဝေပါတယ် ။ မူရင်းတင်သူက သူငယ်ချင်း ကိုဇော်ဦးပါ ကိုယ်တွေ့မို့ စမ်းကြည့်စေချင်တယ် ။ သူငယ်ချင်း ကိုဇော်ဦး Post သေချာလို့ကြေငြာပါရစေ ၂၀၀၅ကစလို့ဒူးနာခဲ့တာ ၂၀၀၈မှာဒူးထဲမှာ ချောတဲ့လမ်းကြောင်းသိပ်မရှိတော့ဘူး လမ်းတောင်သိပ်မလျောက်ပါနဲ့လို့ profကပြောတယ် ။ ၆/ ၈ / ၂၀၁၈ ရက်နေ့က မတွေ့တာနှစ်ပေါင်း၄၀ကျော်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းသင်္ချာပါမောက္ခကိုဝင်းဆွေ(အငြိမ်းစား)ပေးတဲ့ဆေးနည်း ၆/၈/၁၈နေ့မှာဘဲစလိမ်းတာကနေ့ ၇၅%လောက်ကောင်းနေပါ ။ ပြီ သူငယ်ချင်းကတော့လည်ပင်း ကြီးပေါင်းဇက်လိမ်နေတဲ့အဆင့်ကို ၄ /၅ ရက်နဲ့ပျောက်ခဲ့တယ်လို့ နုတ်ပြောလေးနဲ့မျှဝေလို့ ၃. ၄ ဦးလောက်လဲအဆင်ပြေနေကြပြီ ။ ဝေဒနာရှိနေရင်ကောင်းစေချင်လို့ထပ်ဆင့်ဖြန့်ဝေတာပါ ။ … Read more
Categories Hearth Tags ဒူးကျီးပေါင်း
သုံးလတိတိ ေဆးခန္းလဲျပတာ မေပ်ာက္ဘူး နားျပည္ယိုတာ ဒီနည္းေလးနဲ႔မွ ေပ်ာက္သြားလို႔
ကျမရဲတူလေးနှားပြည်ယိုတာ သုံးလတိတိပါဆေးခန်းလဲပြတယ် မပျောက်ဘူး ။ငွေလဲတစ်သိန်းကျော်ကုန်တယ် ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ဆေးနည်းလေးပြောပြလို့ ကျောက်ချည်ကိုသွေးပီးနှားမှာနှာလည် ့လေးနဲ့ထည် ့ပေးလိုက်တာလက်တွေ ့ပျောက်ပါတယ် ဆေးနည်းလေးမျှဝေပါရစေရှင့် Zawgyi က်မရဲတူေလးႏွားျပည္ယိုတာ သုံးလတိတိပါေဆးခန္းလဲျပတယ္ မေပ်ာက္ဘူး ။ေငြလဲတစ္သိန္းေက်ာ္ကုန္တယ္ ။ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ေဆးနည္းေလးေျပာျပလို႔ ေက်ာက္ခ်ည္ကိုေသြးပီးႏွားမွာႏွာလည္ ့ေလးနဲ႔ထည္ ့ေပးလိုက္တာလက္ေတြ ့ေပ်ာက္ပါတယ္ ေဆးနည္းေလးမွ်ေဝပါရေစရွင့္
Categories Hearth Tags နှားပြည်ယိုတာ
ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူ အမ်ားစုရဲ႕ တကယ့္ဘဝအမွန္ေတြ
တောင်းရမ်းစားသောက်သူ အများစုရဲ့ တကယ့်ဘဝအမှန် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁နှစ်ကျော်လောက်က..မန္တလေးမြို့အတွင်းမှာ လိုက်လံတောင်းစားနေတဲ့..ကလေးလူကြီး တော်တော်များများကို တွေ့ဆုံပြီး.. သူတို့အတွက်အလုပ်ရရှိရေး..စားဝတ်နေမှု၊ အဆင်ပြေရေး..တို့အတွက် ကျတော်နဲ့ ကျတော်တို.ရဲ့ ဆရာတွေ စုပေါင်းပြီး သုတောင်းစား တော်တော်များများနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီတွေ့ဆုံမှုမှာ ညဈေးတန်းမှာတောင်းစားနေသူများ၊ မိန်းထဲမှာ..တောင်းစားနေသူများ၊ ရတနာပုံဈေး အနီးတဝိုက် တောင်းစားနေသူများ၊ ဘုရားကြီး.အနီး.ပတ်ဝန်းကျင်တောင်းစားနေသူများနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်တော့ သူတို့အားလုံး..ရိုးရိုးသားသား လုပ်ကိုင်စားသောက်နိုင်ဖို့အတွက်ပါ။ ဒါကြောင့်.သူတို့တွေနဲ့ အဆင်ပြေနိုင်မယ့် အလုပ် နေရာတော်တော်များများကိုလည်း အစကတည်းက ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ တော်ကြာ အလုပ်နေရာ မရှိလို့ မလုပ်ချင်ဘူးလို့ ပြောမှာ စိုးလို့ပါ။ အဆုံးသတ်.ကတော့…မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ တောင်းစားသူများကို လေ့လာလိုက်တဲ့အချိန်မှာ တောင်းစားသူအများစုမှာ မိသားစုလိုက်ဖြစ်ကြပါတယ်။ တကယ်..မရှိလို့တောင်းစားတဲ့လူတွေလည်း မရှိဘူးမဟုတ်ပါဘူး ရှိပါတယ် ဒါပေမယ့် အရမ်းနည်းလွန်းပါတယ်။ ကျတော်တို့တွေ့ဆုံပြီး မေးမြန်းတဲ့မိသားစုတစ်စုဆိုရင် သူတို့တစ်အိမ်လုံးရဲ့ တစ်ရက် … Read more
Categories Local News Tags ေတာင္းရမ္းစ
“နေပြည်တော်သို့ လာသူများ အောက်ပါ အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးရေးဂိတ်များတွင် ပြသနိုင်ရပါမည်” (၁)အစိုးရ ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန၏ ခရီးသွားလာခွင့်အမိန့် MO ပြသနိုင်ရပါမည်။ (၂) ပြည်ထောင်စုအဆင့် အစိုးရ / ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည့် နိုင်ငံခြား သားများ / လူပုဂ္ဂိလ်များ / အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည် ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ / ဝန်ကြီးဌာန ၏ ခေါ်စာပြသနိုင်ရမည်။ (၃) ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများ / ပြည်သူများ အနေ ဖြင့် မိမိတို့ နေထိုင်သည့် နေရာ ရပ်ကွက်မှ အဆို ပါ နေရာတွင်မိမိအမှန်တကယ် နေထိုင်ကြောင်း ထောက်ခံစာပြသရပါမည်။ ၇ရက်အတွင်းသာ အဆိုပါ ထောက်ခံစာသည်တရားဝင်ပါသည်။( နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက passport … Read more
Categories Local News Tags ေနျပည္ေတာ္
၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တက်ဘာလအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အာကာသဖြစ်စဉ်များ
၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တက်ဘာလအတွင်း ဖြစ်ပေါ်မည့် အာကာသဖြစ်စဉ်များ စက်တင်ဘာလထဲမှာတော့ မိုးရာသီကုန်ဆုံးပြီး ဆောင်းရာသီသို့ စတင် ချင်းနင်းဝင်ရောက်ပါတော့မည်။ စက်တင်ဘာ (၂) ရက်နေ့ဟာ ဝါခေါင်လပြည့်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ လမင်းဟာ နေရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် (တနည်း) စန်းယှဉ်ရာအရပ်ဖြစ်တဲ့ ကုမ်ရာသီ (Aquirius) အတွင်းမှာ မိုးသားတိမ်တိုက်များအကြား တစ်ညလုံး ထွန်းလင်းတောက်ပနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ (၆) ရက်နေ့ညမှာတော့.. လမင်းနဲ့ အင်္ဂါဂြိုဟ် (မားစ်) တို့ဟာ လွန်စွာမှ နီးကပ်ကြမည်ဖြစ်ပြီး တောင်အမေရိကနှင့် အနောက်အာဖရိကဒေသတို့မှာ အင်္ဂါဂြိုဟ်ကို လဖုံးကွယ်သွားခြင်းကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအချိန်မှာ လနှင့် အင်္ဂါဂြိုဟ်တို့ ရှိနေမယ့်တာရာကတော့ မိန်ရာသီ (Pisces) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လမင်း (လခြမ်း) ဟာ စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်မှာ … Read more
Categories Local News Tags အာကာသဖြစ်စဉ်များ
မနက္တိုင္းပူေဇာ္ႏိုင္တဲ့ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္အား. မ်က္ႏွာသစ္ေတာ္ေရ ပူေဇာ္နည္း ..
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်အား..မျက်နှာသစ်တော်ရေကပ်နည်းလေးပါ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်အား..မျက်နှာသစ်တော်ရေကပ်နည်းလေးပါ မခက်ပါဘူး..မနက်တိုင်းပူဇော်ကြစေဖို့ရွှေပေါ်ကျွန်းဆရာတော်ကြီး၏ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်အားမျက်နှာသစ်တော်ရေကပ်နည်း နံနက်စောစော အရုဏ်လာချိန်တွင် ငွေဖလားနှင့်ဖြစ်စေ ကြေးဖလား နှင့်ဖြစ်စေ .. အေးမြကြည်လင်သန့်ရှင်း စင်ကြယ်သောရေကိုထည့်ပြီး အရှေ့ဘက် သ်ု့ မျက်နှာမူ ၍ ..ထိုရေဖလားကို ဦးခေါင်းထက်တိုင်ပင့်မြှောက်ပြီး ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်အား ဆက်ကပ်လှုဒါန်းပါ ။ ” ဗုဒ္ဓံ သက်တော်ထင်ရှား မြတ်စွာဘုရား သခင်အရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ဘုရား အား ဤ အေးမြကြည်လင် သန်ု့ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူသော ..မျက်နာသစ်တော်ရေ .. အာလုပ်ကျင်းတော်ရေကိုဆက်ကပ်ပါ၏ ။ လှုဒါန်းပါ၏ အရှင် ဘုရား “ဟု့ နှုတ်မှစိတ်မှလေးနက်ကိုင်းရှိုင်းညွတ်တွားစွာဖြင့်ဆက်ကပ်လှုဒါန်းပါ ။ပြီးသောအခါ .. ထိုရေတော်ဖလားကိုမလျက်ပင် ” ပဉ္စဗုဒ္ဓါ နဠာတေ တိဋ္ဌတု့ ” ဟု့ သက်စေ့ ထက်တစ်ခေါက် ပိုရွတ်ပေးပါ ။ ပြီးလျှင် … Read more
Categories Buddha Tags မျက်နှာသစ်တော်ရေ
ေပြး၊ ဝဲ၊ ယားနာ၊ ဦးေခါင္းမွဒက္ေတြအတြက္ စိတ္မညစ္ရေအာင္
ဦးခေါင်းမှဒက်_ဝဲ_ပွေး_ယားနာများအတွက် လိမ်းဆေးဖော်နည်း ၁။ ကွမ်းသီးအနုအပိန် တစ်ကျပ်သာ( ကွမ်းသီးကြက်ချေး) ဟုခေါ်သည် ။ ၂ ။ လေးညှင်း တစ်ကျပ်သား ၃ ။ ကင်ပွန်းသီး​ခြောက် လေးပဲသား ၄ ။ ဆေးဒန်းတစ်ကျပ်သား ( ဆေးဒန်း = ပရဆေးဆိုင်တွင်ရသည်) ထိုလေးမျိုးကို ဒယ်တစ်ခုတွင် ကျွမ်းအောင်လှော် ပြီးအမှုန့်ထောင်းပါ ။ ၎င်းအမှုန့်ကိုဗူးတစ်ခုထဲထည့်ထားပြီး ဆေးတစ်ခါလူးစာကိုအုန်းဆီဖြင့်ရောပြီးလူးပေးပါ ။ ဆေးတဖုံမကုန်ခင် သက်သာပျောက်ကင်းပါသည် ။ တိုင်းရင်းဆေး ဆရာကြီး ဦးတင်ထွေး Zawgyi ဦးေခါင္းမွဒက္_ဝဲ_ေပြး_ယားနာမ်ားအတြက္ လိမ္းေဆးေဖာ္နည္း ၁။ ကြမ္းသီးအႏုအပိန္ တစ္က်ပ္သာ( ကြမ္းသီးၾကက္ေခ်း) ဟုေခၚသည္ ။ ၂ ။ ေလးညႇင္း တစ္က်ပ္သား ၃ ။ ကင္ပြန္းသီး​ေျခာက္ ေလးပဲသား ၄ … Read more
Categories Hearth Tags ဦးခေါင်းမှဒက်
သင်လက်ဖဝါးပြင်မှာ ဒီလို ထူးခြားတဲ့ အမှတ်အသားတစ်ခုပါရင် ဖတ်ကြည့်ပါ
August 30, 2020 by Nalonetar Diary
အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသော လက်ဖဝါးပြင်မှ ထူးခြားအမှတ်အသား (၉) မျိုး အလွန်ထူးဆန်းသော သဘာဝအင်အားတို့သည် လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် သီးသန့်ရှင်သန်လျှက်ရှိရာ ထိုအစွမ်းတို့၏ အံ့ဖွယ်ရာ သတ္တိထူးတို့က လက္ခဏာရှင်ကို စိုးမိုးလျှက်ရှိကြသည်။ ထို့စွမ်းအင်တို့၏ အမှတ်အသားကို လက်ဖဝါးပြင်တွင် သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနပြုရာတွင် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝပြီး လက္ခဏာရှင်ကို ရာနှုံန်းပြည့် ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်ကိုပေးသော အထူးအမှတ်အသားများ ဖြစ်ပေါ်လာပေသည်။ ထိုအမှတ်အသားများစွာထဲမှာ အလွန်အတွေ့များပြီး အမှန်တစ်ကယ်လည်း လူတစ်ယောက်၏ ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်ကို ဖန်တီးသော လက်ဖဝါးပြင်မှာ ထူးခြားသော အမှတ်အသား (၉) မျိုးအကြောင်းကို စာရှည်မည်စိုးသဖြင့် အနှစ်ချုပ်တင်ပြလိုပါသည်။ ထူးခြားအမှတ်အသား (၉) မျိုးကတော့ – ၁။အစက်ကလေးများ ၂။စက်ဝိုင်းများ ၃။ကျွန်းသဏ္ဍာန် ၄။လေးထောင့်အမှတ်အသား ၅။သုံးထောင့်အမှတ်အသား ၆။ကြက်ခြေအမှတ်အသား ၇။ခရင်းခွ ၈။ရာဇမတ်ကွက်များ ၉။ကြယ်များ စသည်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ ၁။ အစက်ကလေးများ။ ။ … Read more
Categories Horoscropes Tags အမှတ်အသား
တစ်ပတ်စာ ခုနှစ်ရက်သားသမီး ကံကြမ္မာဟောကိန်း (31-8-2020 to 6-9-2020) ..
တစ်ပတ်စာ ခုနှစ်ရက်သားသမီး ကံကြမ္မာဟောကိန်း (31-8-2020 to 6-9-2020) တနင်္ဂနွေသားသမီး သင့်အတွက်ကံကြမ္မာကောင်းများစတင်ဝင်ရောက်လာမည့်အချိန်ပါ ဤအချိန်တွင်သင်ဘာပဲလုပ်လုပ်အောင်မြင်မူများရရှိနေပါလိမ့်မည် မိဘဘက်မှဆွေမျိူးများညအိပ်ရောက်ရှိလာတတ်ပါသည် ဘိုးဘွားပိုင်အမွေအနှစ်များ ရရှိခံစားနိူင်မည့်အခွင့်အရေးများပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မည် အိမ်ခြံမြေအကျိူးပေးပါလိမ့်မည် ကျန်းမာရေးတွင်ခါးမကြာခဏနာနေလိမ့်မည် ငယ်ရွယ်သူများချစ်သူထံမှလက်ဆောင်ပစ္စည်းရရှိလိမ့်မည် ထီ၁၉ပါသောထီထိုးပါ ယတြာ မိမိအိမ်ရှေ့တွင် ငွေပန်းပင်နှစ်ပင်စိုက်၍ ငွေအကြွေစေ့စိမ်ထားသောရေဖြင့်မကြာခဏလောင်းပေးပါ တနင်္လာသားသမီး ပညာရေးလုပ်ငန်းပွဲစားလုပ်ငန်းများအကျိူး ပေးမည့်အချိန်ကာလပါ မိမိရသင့်ရထိုက်သောငွေကြေးအပြင်အပိုထပ်ဆောင်းဆုကြေးများပါရရှိပါလိမ့်မည် ကျန်းမာရေးမကြာခဏချူ ချာနေလိမ့်မည် အထူးသဖြင့်အသေးအမွှားလေးတွေမကြာခဏဖြစ်နေတတ်ပါသည် အနက်ရောင်အသုံးအဆောင်များရှောင်ပါ အစိမ်းရောင်အသုံးအဆောင်များများများသုံးစွဲပေးပါ ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးတွင်အနေနီးသူနှင့်သံယောဇဉ်တွယ်တာမိတတ်ပါသည် ထီ၁၇ပါသောထီထိုးပါ ယတြာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်ကုဋီဆေးသောတုတ်တံလှူ ပေးပါ အင်္ဂါသားသမီး မိမိလုပ်ငန်းတွင် အရင်းငွေနှင့်အမြတ်ငွေလုံးလည်ချာလည်လိုက်နေတတ်သောကာလပါ ရှုံးမှန်းမသိမြတ်မှန်းမသိဖြစ်နေပါလိမ့်မည် မိမိရစရာရှိသောငွေများကိုလည်း တစ်လုံးတည်းတစ်ခဲတည်းပြန်မရဘဲ အလီလီခွဲပြန်ရနေပါလိမ့်မည် အိုးအိမ်ပြောင်းသို့မဟုတ် အလုပ်နေရာအပြောင်းအလဲရှိမည် ကျန်းမာရေးတွင် အဆစ်အမြစ်များမကြာခဏ ကိုက်ခဲနေမည် ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးတွင် သင်တန်းတက်ရင်းဖူးစာဘက်တွေ့မည် ထီ၁၃ပါသောထီထိုးပါ ယတြာ ကြက်သွန်ကြော်ဘုရားလှူပါ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီး မိမိနှင့်သဟဇာတမဖြစ်သောအလုပ်အကိုင်များလုပ်ကိုင်နေရလိမ့်မည် အစားမှားဆေးမှားဖြစ်တတ်သောအချိန်ပါ မိမိရဲ့စိတ်ဆန္ဒလောဘအာသာကို … Read more
Categories Horoscropes Tags တစ်ပတ်စာ
တစ်ပတ်စာ ခုနှစ်ရက်သားသမီး ကံကြမ္မာဟောကိန်း (31-8-2020 to 6-9-2020)